Ciidanka Dowladda Somaliya, ayaa waxa ay soo qabteen saddex nin iyo walxaha qarxa – STAR FM SOMALIA
Ciidanka Dowladda Somaliya, ayaa waxa ay soo qabteen saddex nin iyo walxaha qarxa
Ciidanka Dowladda Somaliya, ayaa gudaha u galay guri ku yaala Degmada Afgooye Ee Gobolka Shabellaha Hoose, gaar ahaan xaafadda Xaawo Taako, waxayna ku soo qabteen saddex nin iyo walxaha qarxa.
Raggan, ayaa waxaa lagu soo qabtay hawlgal ammaanka lagu xaqiijinaayay oo xalay, ay Ciidanka Dowladdu ka sameeyeen xaafadda Xaawo Taako, ka dib markii la helay macluumaad la xiriira guryahaasi.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Maxamed Xuseen Maxamed (Shiine), ayaa sheegay raggaasi in si dhow loola xiriirinaayo Ururka Al Shabaab, sidoo kalana ay qorsheynayeen weeraro lagu qalqal-gelinaayo amniga.
Afhayeenka oo u waramay Dhacdo.com, ayaa tibaaxay in hadda raggaasi lagu haayo mid ka mid ah xarumaha hay’adaha ammaanka ku lee yihiin Degmadaasi.
Maxamed Shiine, ayaa ku waramaaya in baaritaano dheeraad ihi lagu samaynaayo xubnahaasi, ka hor inta aan cadaaladda la horkeenin, sharcigana lagu qaadin.
Laba ka mid ah saddexda nin ee la tuhunsan yahay, ayaa waxaa lagu kala magacaabaa C/weli Cismaan Cabdi iyo Aweys Sheekh Xasan.
Mohammed Makkawi Ibrahim ayaa lagu diley dalka Soomaaliya kadib markii uu sheegay inuu ku biirayo ururka IS